ချောင်းသာ၊ငွေဆောင်၊ဂေါ်ရင်ဂျီကမ်းခြေများ ဇွန်လကုန်အထိဆက်ပိတ်ထားရန် ဧရာဝတီတိုင်း အစိုးရက အမိန်.ထုတ်
Breaking News , June 14, 2020
ချောင်းသာ၊ငွေဆောင်၊ဂေါ်ရင်ဂျီကမ်းခြေများ ဇွန်လကုန်အထိဆက်ပိတ်ထားရန် ဧရာဝတီတိုင်း အစိုးရက အမိန်.ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။
၁၄-၄-၂၀၂၀ ရက်နေ. နိုင်ငံခြားငွေ လဲလှယ်နှုန်းများ
၁၄-၄-၂၀၂၀ ရက်နေ. နိုင်ငံခြားငွေ လဲလှယ်နှုန်းများ (၁၃/၁၄-၆-၂၀၂၀)ရက်များသည် ဘဏ်ပိတ်ရက်များဖြစ်သဖြင့် ၁၂-၆-၂၀၂၀ ညနေ နောက်ဆုံးဈေးနှုန်းကိုဖေါ်ပြထားပါသည်။ Source – KBZ Bank
၁၄-၄-၂၀၂၀ ရက်နေ. ပြည်တွင်း စက်သုံးဆီဈေးနှုန်းများ
၁၄-၄-၂၀၂၀ ရက်နေ. ပြည်တွင်း စက်သုံးဆီဈေးနှုန်းများ Source – Max Energy
ယနေ. ( ၁၄-၆-၂၀၂၀ ) ရက်နေ. ရန်ကုန်၊မန္တလေး ရွှေဈေးနှုန်းများ
( ၁၄-၆-၂၀၂၀ ) ရက်နေ. ရန်ကုန်၊မန္တလေး ရွှေဈေးနှုန်းများ တစ်ကျပ်သားရောင်းဈေးများဖြစ်ပါသည်
ယနေ. ( ၁၃-၆-၂၀၂၀ ) ရက်နေ. ရန်ကုန်၊မန္တလေး ရွှေဈေးနှုန်းများ
Breaking News , June 13, 2020
ယနေ. ( ၁၃-၆-၂၀၂၀ ) ရက်နေ. ရန်ကုန်၊မန္တလေး ရွှေဈေးနှုန်းများ Source – အောင်သမာဓိရွှေဆိုင်
Breaking News , June 12, 2020
Breaking News , June 11, 2020
Breaking News , June 10, 2020
လူရွှင်တော် တိမ်ဝါ တီထွင်ထားတဲ့ သုံးဘီးကားဆိုင်ကယ် မင်္ဂလာပါကျေးဇူးရှင်များနှစ့်သက်လို့သဘောကြကြိုက်ခဲ့လို့လိုချင်ရင်ဧရာဝတီတိုင်းညောင်တုန်းမြို့နယ်ထိပ်ဝကြီးရှမ်းစုရွာဗိုလ်မြတ်ထွန်းတံတားအနီး မိဘဂုဏ်ရည် ဆိုင်ကယ်ပြူပြင်ဆိုင်ကိုဆက်သွယ်ပေးပါ။ ဖုန်း – ၀၉၇၉၀၂၀၃၃၄၁ ၊ ၀၉၆၉၁၃၉၉၈၂၉ ဟာသစူပါတိမ်ဝါ
Breaking News , June 09, 2020
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊အမရပူရမြို့နယ်ရှိ ဦးပိန်တံတားယာယီပိတ်ထားချိန်တွင် တံတားပေါ် ဖြတ်သန်းခြင်း မပြုရန် ဗွီနိုင်းဆိုင်းဘုတ်များတပ်ဆင်၍ အသိပေးကာ သစ်သားဖြင့် ကာရံပိတ်ဆို့ထားသော်လည်း ဖြတ်ကျော် ဝင်ရောက်ဖြတ်သန်းမှုများရှိကြောင်း သိရသည်။အဆိုပါ ပိတ်ဆို့ထားသော သစ်သားများထပ်မြင့်ကာ သံဆူးကြိုးများ ဖြင့် ထပ်မံကာရံခြင်းကို ဇွန် ၆ ရက်...
Breaking News , June 08, 2020
LNG to Power စီမံကိန်းများအတွက် မြန်မာနိုင်ငံသို့ LNG သင်္ဘောရောက်ရှိလာမှုနှင့်အဆိုပါစီမံကိန်းများမှ လျှပ်စစ် ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ရန် ဆောင်ရွက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ Liquefied Natural Gas (LNG) ဖြင့် ပထမဆုံးအကြိမ် ဓာတ်အားထုတ်လုပ်မည့် သာကေတ ၄၀၀...